ग्यालरी ｜ सेन्ट मरियम जापानी विद्यालय
1. भाषण भाषण प्रतियोगिता
तपाईं सेन्ट मरियम सिकेको जापानी क्षमता, तपाईंले आफ्नो भावना साहस थिच्नुहोस्। 2019 को भाषण प्रतियोगिता, विद्यार्थीहरूको विभिन्न देशहरूमा, प्रत्येक स्तर प्रतिनिधिको आफ्नै शब्दमा भन्छु, यो छाती मा प्रहार भएको थियो। उत्कृष्टता पुरस्कार जित्न गर्न सबैसँग, क्वालिफाइङ topped गर्ने केही मानिसहरू बाहेक, त्यहाँ देश को रंगीन संस्कृति द्वारा एक भाषण थियो। ग्यालरी
2. क्रिसमस पार्टी
अभिभावक गीत वा नृत्य, लटरी, प्रत्येक देश को संस्कृति विशेषताहरु जो गाइरहेका वर्ग, एक लक्जरी प्रिमियम हिट हरेक वर्ष उत्तेजना को सबै भन्दा राम्रो देखाउनेछ। व्यवहार स्ट्याक छ कि एक प्रदर्शन कक्षा गर्न तातो हावा को स्थल धेरै बढेको छ। यो घटना मार्फत, तपाईं सेन्ट मरियम को बहुराष्ट्रीय महसुस हुनेछ।
3. अन्य घटनाहरू
पर्यटन Asakusa टोकियो, सुमो हेर्दै, डिज्नील्याण्ड (शहर) मा · BBQ यात्रा, स्की रिसोर्ट्स कक्षा, Utsunomiya स्थानीय चाडहरूमा, आतिशबाजी, यस्तो Mashiko yaki अनुभव मा घटनाहरू मार्फत, जापानी सिक्दै गर्दा, जापानी परम्परागत संस्कृति को अनुभव जस्तै मौका धेरै पनि छन्।